"I-Happy Family B&B" Isakhiwo esinamagumbi okulala ayisithupha, esihlala ezintathu esingu-375-square-square-meter singamumatha abantu abangu-18-20 eduze kwase-Xiaoqikong, e-Shuichun River rafting, kanye nezindawo zokupaka mahhala esiteshini.
Qiannan, Guizhou, i-China
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-韦明娟
U-韦明娟 unokuphawula okungu-23 kwezinye izindawo.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-韦明娟 izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Lesi yisakhiwo somndeni owodwa esingahlala abantu abaphakathi kuka-18 no-20. Inengadi yangasese, indawo yokupaka, inkundla yokubuka kanye namafasitela asuka phansi kuya ophahleni.Sifanele umndeni kanye neqembu labangane.
Lesi ibhilidi eliwumndeni owodwa elinendawo yokupaka engadini yangasese. Kukude ngemizuzu engaphezu kuka-20 ukusuka e-Xiaoqikong Scenic Area e-Libo County, imizuzu engaphezu kuka-30 ukusuka eHlathini i-Maolan Karst, kanye namamitha angu-100 ukusuka endaweni yokudla yasedolobheni lasendulo. Unezokuthutha nempilo elula.
Kungathunyelwa umlayezo ngocingo
U韦明娟 Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Qiannan namaphethelo